ကိုယျ့ယောကျြား အငယျအနှောငျးမထားရဲအောငျ လကျမလညျအောငျထားရမယျ့ နညျးလမျးတဈခုကိုပွောပွလာတဲ့ ခငျလှမျး - MMTECHHOUSE
ကိုယျ့ယောကျြား အငယျအနှောငျးမထားရဲအောငျ လကျမလညျအောငျထားရမယျ့ နညျးလမျးတဈခုကိုပွောပွလာတဲ့ ခငျလှမျး
သရုပျဆောငျ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးတို့ကတော့ ခဈြသူဘဝကတညျးက လိုကျဖကျလှနျးတဲ့စုံတှဲတှအေဖွဈ ပရိသတျတှရေဲ့ သကျမှတျခွငျးခံရတာပဲဖွဈပါတယျ။ .ခဈြသူဘဝမှာကတညျးက ရငျသှေးလေးကို ရရှိခဲ့တဲ့ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးတို့ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ (၂၀၂၀) ခုနှဈမှာပဲ လကျထပျခဲ့ကွတာ ပဲဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျ အိမျထောငျသကျအနညျးငယျရလာခဲ့ပွီဖွဈတဲ့ ခငျလှမျးတို့ဇနီးမောငျနှံဟာ တဈယောကျကိုတဈယောကျ နားလညျမှုအပွညျ့ပေးပွီး အိမျထောငျတဈခုကို တညျဆောကျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ ခငျလှမျးက ဖစျေ့ဘုတျပျေါမှာမွငျတှနေ့ရေတဲ့ ဖောကျပွနျမှုတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး သူမရဲ့ထငျမွငျယူဆခကျြတဈခုကို ပွောလာပါတယျ။ ခငျလှမျးက “ငယျတယျဆိုတာ အသကျပဲ ကောငျးတာနျောအမိတို့ ။ အဲတော့ ကိုယျ့ယောကျြားကို အလုပျရှုပျအောငျလုပျထားပါ . အကွီးလညျးကိုယျပဲလုပျ အငယျလညျး ကိုယျပဲလုပျ. ဘာပဲဖွဈဖွဈ လုပျသာလုပျ သူ့ခမြာ လကျကိုမလညျရှာတော့ဘူး 😝 ” ဆိုပွီး ဟာသလေးနှောကာ ပွောလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ခငျလှမျးကတော့ ကိုယျ့ယောကျြား အငယျအနှောငျးမထားရဲအောငျ အကွီးလညျးကိုယျပဲလုပျ အငယျလညျး ကိုယျပဲလုပျဆိုပွီး အရှနျးဖောကျပွောလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရော ခငျလှမျးပွောတာ သဘာဝကရြဲ့လားဆိုတာ ပွောပွခဲ့ပါဦးနျော။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ website ပျေါတှငျတငျထားသော သတငျးမြားကို အခွား‌ page မြား နှငျ့ websites မြား ‌မှ ကူးယူဖျောပွခွငျးအား ခှငျ့မပွုပါဘူး။ကြေးဇူးပွု၍ ကူးယူခွငျးမပွုလုပျရနျ လေးစားစှာဖွငျ့ မတ်ေတာ ရပျခံအပျပါသညျ။
ကိုယ့်ယောကျာ်း အငယ်အနှောင်းမထားရဲအောင် လက်မလည်အောင်ထားရမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပြောပြလာတဲ့ ခင်လွှမ်း
သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ကတော့ ချစ်သူဘဝကတည်းက လိုက်ဖက်လွန်းတဲ့စုံတွဲတွေအဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ သက်မှတ်ခြင်းခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ .ချစ်သူဘဝမှာကတည်းက ရင်သွေးလေးကို ရရှိခဲ့တဲ့ စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၂၀) ခုနှစ်မှာပဲ လက်ထပ်ခဲ့ကြတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် အိမ်ထောင်သက်အနည်းငယ်ရလာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ဇနီးမောင်နှံဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်မှုအပြည့်ပေးပြီး အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ခင်လွှမ်းက ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ ဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တစ်ခုကို ပြောလာပါတယ်။ ခင်လွှမ်းက “ငယ်တယ်ဆိုတာ အသက်ပဲ ကောင်းတာနော်အမိတို့ ။ အဲတော့ ကိုယ့်ယောက်ျားကို အလုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်ထားပါ . အကြီးလည်းကိုယ်ပဲလုပ် အငယ်လည်း ကိုယ်ပဲလုပ်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်သာလုပ် သူ့ခမျာ လက်ကိုမလည်ရှာတော့ဘူး 😝 ” ဆိုပြီး ဟာသလေးနှောကာ ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခင်လွှမ်းကတော့ ကိုယ့်ယောကျာ်း အငယ်အနှောင်းမထားရဲအောင် အကြီးလည်းကိုယ်ပဲလုပ် အငယ်လည်း ကိုယ်ပဲလုပ်ဆိုပြီး အရွှန်းဖောက်ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော ခင်လွှမ်းပြောတာ သဘာဝကျရဲ့လားဆိုတာ ပြောပြခဲ့ပါဦးနော်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ပေါ်တွင်တင်ထားသော သတင်းများကို အခြား‌ page များ နှင့် websites များ ‌မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းအား ခွင့်မပြုပါဘူး။ကျေးဇူးပြု၍ ကူးယူခြင်းမပြုလုပ်ရန် လေးစားစွာဖြင့် မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဂီတနဲ့ပတျသကျရငျ မိဘတှဆေီက အပွညျ့အဝ Support လုပျခံရကွောငျး ပွသလာတဲ့ ဟနျနတော
ယောကျြားထုကွီးအားလုံးအတှကျ နဝေငျးနဲ့ သူရိနျကြျောမိုးတို့ကို လူသိရှငျကွားအကူအညီတောငျးလာခဲ့တဲ့ Ah Boy
By editor y